October 30, 2020 – Page 2 – Kichuu
Ilmaan Oromoos gara WBOtti fiiguu qofatu isin baasa!! Hoogganaan waliigalaa waraana lafoo pp Mollaa H/maarem bilxiginnaa ganee gara maatii isaatti galuun simannaan howwaa taasifameeraaf. Ilmaan Oromoos gara WBOtti fiiguu qofatu isin baasa. Oda Labsi Fajji
ODUU AMMEE! “Odeessa Kessaa Miliqxee Baate. Tibba darbe kanneen ABO keessaa maqan Miseensota Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO Araarsoo Biqilaa fi Jabeessaa Gabbisaa dabalatee, Miseensi Gumii Sabaa ABO ‘Captain’ Xilahuun Bantii jedhamu, ‘sobaa fi sossobbaa [Read More]
The GREAT & Primordial Agaw Nation of Black African Kushites NEVER accept living under Amhara slavery New evidence: recently murdered five young Oromo were very active in community engagement. The evidence released show that they [Read More]